Afrika: Malaayiin qof oo sanad walba la xanuunsada qaadashada cunto aan bad-qabin - Bandhiga Media
“Sanad walba 91 malyuun oo qof ayaa u xanuun sada sababo la xiriira quudashada cunto aanan bad-qabin “ waxaa sidaasi sheegay Ku-xigeenka gudoomiyaha golaha Midowga Afrika Thomas Kwesi Quarty
Ku-xigeenka gudoomiyaha golaha Midowga Afrika oo ka hadlayay xuska maalinta Badbaadada Cuntada Adduunka oo ka qabsoomay xarunta Midowga Afrika oo markii ugu horeysay lagu qabtay heer qaaradeed,ayaa sheegay in la joogo wakhtigii bad-qabka cuntada Afrika la siin lahaa mudnaan gooni ah.
Munaasabadda ayaa waxa isugu yimid danjirayaasha, hogaamiyayaasha Midowga Afrika, shaqaalaha golaha Midowga Afrika iyo wakiilada ururrada iskaashiga la leh.
Waxa masuulkan uu sheegay in tobannaan kun oo qof ay ku dhintaan Afrika sanad walba kadib markii ay cunaan cunto aanan bad-qabin.
Dhinaca kale Ururka Caafimaadka Dunida ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in qiyaastii 600 Malyuun oo ah ku dhawaad ​​1 qof 10-kii qof oo dunida ay ku bukoodaan kadib markii ay quutaan cuntooyinka wasakheysan halka 420,000 kun oo qof u dhintaan sanad walba.
Waxa rubuc kamid ah dhimashada caalamka ee ay sababto adeegsiga cuntooyinka aanan bad-qabin ee laga helo qaaradda Afrika,tiradan ay u dhiganta in ka badan 137,000 kun oo qof sannad kasta.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukuno kala duwan riday maanta+Sawirro